निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरण: डिएनए परीक्षणबाट कसरी फेला पर्छन् अपराधी? - News - Radioupatyaka
Studio Time (NPT) : 02:59:37 PM
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण टुंगोमा पुर्याउन 'डिएनए' परीक्षणको सहारा लिइएको छ।
कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण र भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिज आयुषको डिएनए जाँच गर्न रगत पठाइएको छ।
प्रहरीले यसअघि पक्राउ गरेका दिलिपसिंह विष्टको पनि डिएनए परीक्षण गरिएको थियो। उक्त परीक्षणबाट दिलिपसिंहको संलग्नता नदेखिएको भन्दै रिहा गरिएको छ।
यो मात्र होइन, आपराधिक घटना 'रहस्यमय' बन्दै गएपछि आरोपी वा शंकास्पद व्यक्तिहरूको डिएनए जाँच गरिन्छ। संसारभरि अपराध अनुसन्धान सिलसिलामा 'अचुक' मानिने डिएनए परीक्षण आखिर के हो? अपराधी पक्रन किन यति विश्वासिलो मानिन्छ?
रोगशास्त्र विशेषज्ञ डा. जीवन क्षत्रीका अनुसार डिएनए भनेको मान्छेको जैविक हस्ताक्षर हो, जुन एकअर्कासँग मिल्दैन। डिएनए शरीरको प्रत्येक कोसिकामा हुन्छ। कोसिकाभित्र न्युक्लियस हुन्छ र त्योभित्र डिएनए रहन्छ। बाबुआमाको डिएनए छोराछोरीसँग मेल खान्छ। अरुको मिल्दैन।
'नमूना संकलन गर्दा सावधानी अपनाउने र होसियारीपूर्वक परीक्षण गर्ने हो भने डिएनए अन्तिम सत्य हो,' डा. क्षत्रीले भने, 'यो विज्ञानको देन हो।'
डिएनए परीक्षण गर्ने नेपालमा दुईवटा ठाउँ छन्- राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला र केन्द्रीय प्रहरी विज्ञान प्रयोगशाला।
विशेषगरी आपराधिक घटनामा सामाखुसीस्थित प्रहरी प्रयोगशालामा डिएनए परीक्षण गरिँदै आएको छ। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षत्रीका अनुसार करणीजस्तो घटनामा महिलाको योनीबाट नमूना संकलन गरिन्छ। यसमा दुईवटा नमूना संकलन गरिने उनले बताए।
एउटा नमूना पीडित महिलाकै हुन्छ भने अर्को नयाँ मान्छेको हुन्छ। करणी गर्दा पुरुषले आफ्नो वीर्य योनीमा छाडेको हुन्छ। नमूना परीक्षणबाट कसको वीर्य हो भन्ने छुट्टिन्छ। आरोपी वा शंकास्पद व्यक्तिको डिएनए जाँच्दा मिल्न गएमा उसको संलग्नता खुल्छ।
'संकलित नमूना कोसँग मेल खान्छ, त्यसका लागि विभिन्न व्यक्तिको डिएनए परीक्षण गरिन्छ,' एसएसपी क्षत्रीले भने।
निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कार प्रकरणमा गरिन लागेको डिएनए परीक्षण यही विधिअन्तर्गत पर्छ। टिचिङ अस्पताल, महाराजगन्जका फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीले एसपी विष्टसहित तीनै जनाको रगत संकलन गरी बिहीबारै प्रहरी प्रयोगशालामा बुझाएका छन्। प्रयोगशालाले अब उक्त नमूना रगतबाट डिएनए विवरण निकाल्नेछ। यसबाट उनीहरु घटनामा संलग्न भए-नभएको खुट्टिनेछ।
यस्ता आपराधिक घटनाबाहेक अदालती अंश मुद्दा, अध्यागमन र ब्रिटिस आर्मीको पेन्सनसम्बन्धी घटनाका डिएनए परीक्षण खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले गर्छ। यसले २०६२ सालदेखि सेवा दिँदै आएको छ।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा दुई दशकदेखि कार्यरत दिनेशकुमार झाले शरीरको जुनसुकै कोसिकाबाट डिएनए परीक्षण गर्न सकिने बताए। 'प्राय: रगत र र्‍याल निकालिन्छ,' उनले भने, 'नमूना (रगत वा र्‍याल) ताजा छ भने डिएनए परीक्षणको नतिजा दुई दिनमै आउँछ।'
ताजा नमूना होइन भने परीक्षण गर्न समय लाग्छ। प्रयोगशालाले बढीमा एक महिनाको समय लिने गरेको छ। दिनदिनै नमूना परीक्षण गर्न नसकिने उनले बताए।
'हामीकहाँ मासिक सरदर २५ वटाजति केस आउँछन्। ती सबैको परीक्षण गरी नतिजा दिन्छौं,' उनले भने, 'मुख्यतया: अंश नपाएपछि छोराछोरीले र विदेशमा रहेका बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरी उतै लैजान चाहेमा डिएनए परीक्षण गराइदिन अध्यागमनले पत्रसहित पठाउँछ।'
सम्बन्धित निकायबाट लिखित पत्र नआए डिएनए परीक्षण सुरु नहुने उनले बताए।
'बच्चाको जैविक आमाबाबु हो भने उनीहरुको आधाआधा गुण बच्चामा सरेको हुन्छ। आमाबाबु र छोराछोरीको गुण मिलेमा उसकै छोराछोरी रहेछ भन्ने पत्ता लाग्छ,' उनले भने, 'बाबु र आमाको आधा गुण बच्चामा हस्तान्तरण भएको हुन्छ।'
डिएनए परीक्षणको नतिजालाई अदालतले पनि मान्यता दिने गरेको छ। नेपालमा यससम्बन्धी छुट्टै ऐन छैन। अरु देशमा डिएनए परीक्षण ऐन नै रहेको उनले बताए।
'नयाँ फौजदारी संहितामा डिएनएबारे केही उल्लेख छ', उनले भने।